चलचित्र क्षेत्रको व्यावसायिक अवस्था डामाडोल अझै केही बर्ष चलचित्र क्षेत्र प्रभावित हुने | Cine Khabar
Home feature news चलचित्र क्षेत्रको व्यावसायिक अवस्था डामाडोल अझै केही बर्ष चलचित्र क्षेत्र प्रभावित हुने
काठमाडौँ । कोरोनाभाइरस जोखिमका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र चलचित्र क्षेत्र हो । लकडाउन खुलेसँगै अरु क्षेत्र केही रूपमा क्रियाशील भए पनि चलचित्र क्षेत्र खुल्ने कुनै टुङ्गो लागेको छैन । दर्शकको साथ आवश्यक रहेको क्षेत्र भएका कारण पनि यो क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि बन्द भएको थियो भने सबैभन्दा पछाडि मात्रै खुल्नेछ ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्र कोरोना भाइरसको जोखिम अघि नै प्रभावित अवस्थामा थियो । नेपाल चलचित्र सङ्घका अनुसार कूल निर्माण भएको चलचित्रमा चार देखि पाँच प्रतिशतले मात्रै नाफाको व्यापार गरिरहेको चलचित्र क्षेत्र कोरोना भाइरसको जोखिमपछि शून्य अवस्थामा झरेको हो ।
हाल चलचित्र क्षेत्रमा तीन अनुत्तरित प्रश्नहरु तेर्साएका छ्न । पहिलो- चलचित्र क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किन्छ कि फर्किँदैन ? दोस्रो- सङ्कटमा रहेको चलचित्र क्षेत्र झन सङ्कटको चपेटामा पार्ने हो कि ? तेस्रो- अबका दिनमा चलचित्र क्षेत्रको व्यावसायिक अवस्था डामाडोल हुनेछ । यीमध्ये बलियो प्रभावचाहिँ दोस्रोलाई मान्न सकिन्छ । किनभने सङ्कटबाट माथि उठ्दै आएको चलचित्र क्षेत्र पुनः सङ्कटको अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई फेरि पुनःसञ्चालन गर्न चलचित्र विकास बोर्ड, नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ र नेपाल चलचित्र सङ्घको भूमिका मुख्य हुने चलचित्रकर्मीको भनाइ छ ।
कोरोना अघिसम्म नेपालमा पनि देशभरका २०४ पर्दा भएको हलहरुमध्ये ३० वटा कोरोना भाइरस जाखिमकै बीचमा सदाका लागि बन्द भएको चलचित्र सङ्घले जनाएको छ । देशभर ६४ वटा हल भूकम्पको प्रभावदेखि नै बन्द भएका थिए । नेपालमा कूल बन्द हुने हलको सङ्ख्या ७५ पुगेको छ । देशभर १५३ हल कोरोना भाइरस जोखिमको प्रभावमा परेका छन् ।
प्रदर्शन शुरु नभएसम्म अरु गतिविधि अघि बढ्न नसकेका कारण चलचित्र क्षेत्र कहिले सक्रिय हुन्छ भन्ने कुनै टुङ्गो लागेको छैन । नेपाल चलचित्र सङ्घका अनुसार अझै केही महिनासम्म चलचित्र क्षेत्रमा प्रभाव परिरहने निश्चित छ । अध्यक्ष प्रधानका अनुसार सबै क्षेत्र खुलिसकेपछि मनोरञ्जनको आवश्यकता भएपछि बल्ल दर्शक हलमा आउने हुन् । दर्शक नै नआई हल खुल्न सक्दैन । कोरोना भाइरस जोखिमको डर त छँदैछ, मनोरञ्जनका लागि छुट्टै खर्चको आवश्यकता पनि रहन्छ । सामान्य भएकै अवस्थामा खर्च जुटाएर मनोरञ्जनलाई प्रथामिकतामा सबै दर्शकले राख्न पनि मुस्किल छ । यसकारण पनि चलचित्र क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्कन कम्तीमा दुई बर्ष लाग्ने चलचित्रकर्मीको धारणा रहेको छ ।
यता चलचित्र विकास बोर्डले भने चलचित्र क्षेत्रलाई यथाशक्य खुलाउन पहल भइरहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्न्त्रालयसँग तारन्तार खोप व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल बताउँछन् । “एक चरण सबै चलचित्रकर्मीलाई खोपको व्यवस्था गर्नसके रणनीति निर्माण गर्न सजिलो हुन्थ्यो । स्वास्थ्य मापदण्डसहित हल खुलाउन सकिन्थ्यो । त्यसपछि नयाँ चलचित्रहरु निर्माण पनि शुरु हुन्थ्यो । यसो गर्न सके चालु वर्षभित्रै चलचित्र क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन सकिन्थ्यो”, उनले भने । चलचित्र निर्माण नहुँदा निर्माणमा सहभागी सबै चलचित्रकर्मी र प्राविधिकलाई प्रभाव त पर्ने नै भयो । योसँगै वितरण र प्रदर्शन पनि हुन सक्दैन । चलचित्र निर्माणका लागि प्रदर्शन अपरिहार्य छ । जबसम्म चलचित्र प्रदर्शन हुन सक्दैन तबसम्म निर्माण हुन सक्दैन । चलचित्र निर्माण र प्रदर्शन हुन नसक्दा चलचित्र क्षेत्र शून्य अवस्थामा रहन्छ । अहिलेको अवस्था यही नै हो ।